नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जाने भारतीयबाट संक्रमण फैलने खतरा, सरकारको किन वेवास्ता ? - Sankalpa Khabar
नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जाने भारतीयबाट संक्रमण फैलने खतरा, सरकारको किन वेवास्ता ?
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा यतिखेर कोरोना संक्रमण काबुभन्दा बाहिर गएको छ । बितेको २४ घण्टामा भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ३४ हजार ६ सय ९२ पुगेको बताइएको छ ।
सरकारले भारतसँगको सीमा नाकाहरूमा कडाइ गर्न थालिसकेको छ । यसैबीच कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र ९सीसीएमसी० को शनिबार बसेको बैठकले शहरी क्षेत्रमा रहेका सबै विद्यालय वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, सरकारले कोरोनाको संक्रमणको प्रमुख खतरालाई भने बेवास्ता गरिरहेको छ ।भारतले विदेशमा जाने हवाई उडानहरू बन्द गरेदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका भारतीयहरू नेपाल भएर पुनः काममा फर्कन थालेका छन् । गत फेब्रुअरीदेखि नै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अर्थात् ‘एनओसी’ लिनेहरूको थेग्नै नसकिने भीड लागेको छ ।
मानवीयताको नाताले भारतीय कामदारलाई श्रम गन्तव्यसम्म पुग्न सहजता दिनु एउटा कुरा होला तर कोरोनाको हटस्पटबाट यसरी ओइरिएकाहरूबाट संक्रमण फैलियो भने त्यसले भयावह रूप लिने सम्भावना बढी छ ।
नेपालसमाचार पत्रमा खबर छ ।